RSS: Gadzira Chidimbu chako cheKudya Zviri pachena | Martech Zone
RSS: Gadzira Chidimbu chako cheKudya Zviri pachena
Chishanu, January 5, 2007 China, Gumiguru 23, 2014 Douglas Karr
Nekuuya kwemabhurawuza matsva, ini ndaisanyanya kunetseka nezvekuisa yangu RSS batanidza mukati mezviri mune yangu saiti. Ndiri kutanga kufunga zvakare izvozvo.
Dai iwe wanga usati watoziva, aya mabhurawuza matsva anogona otomatiki kuona iyo RSS fudza chero bedzi ichizivikanwa mukati memusoro wepeji. Kubaya pane iyo RSS chiratidzo chinoguma iwe 'kunyorera kune icho chikafu' kuburikidza nebrowser yako. Saka kana iwe uchisarudza iyo yekudhira mubrowser yako, iwe unozosangana neiyo rondedzero yenyaya dzinoshanda dziripo kuburikidza neyekudya
Mukati memusoro wesaiti yangu, ndine inotevera kodhi:
Bhurawuza inozviona yega iyo kodhi uye inopa chiratidzo chekuti iyo feed inogona kunyoreswa ku:
Isati yaburitswa Internet Explorer 7, Microsoft yakasangana nevamwe vanogadzira browser uye vakafunga kuti chiratidzo chepasirese che RSS zvaizova
Kwemwedzi yekupedzisira ye6, ndakavimba nezvangu zvemukati RSS chirevo chevanhu kuti vanyore kune yangu yekudya. Nekudaro, ini ndichangobva kuita bvunzo kwandaisa iyo RSS chinongedzo mutsoka yemapeji angu ese. Fembera chii? Mukati memazuva mashoma mabhadharo angu ezvokudya akasvetuka angangoita makumi maviri muzana! (Ndinoshandisa FeedPress kuteedzera).
Ndinoona izvi hazvisi zvesainzi, asi ndinokurudzira kuti vaverengi vave nazvo RSS feed chinongedzo chakanyatso kuzivikanwa uye chinowanikwa kune vaverengi vako vanoshandisa mamwe maturusi asingango tarise chinongedzo kuburikidza nekodhi yako yemusoro.
Tags: kunyoresachikafufeed yemusoro tagfeed linkfeedburnerrel chinjanarss feedrss musoro tagrss xmlXML
WordPress: Iyo # 1 Plugin saiti yega yega INOFANIRA kuve nayo
WordPress: Backup uye Dzosera kune imwe Server
Ndira 5, 2007 na7: 19 PM
Chimwe chikonzero chekuita izvozvo: dzimwe nguva vaverengi vanoda kubatanidza kunyorera kwako. Pandinoverenga mumwe munhu wandinoda kunyorera kwaari, ini ndinowanzovasanganisira muzvikamu zvangu zvezuva pamwe nekatsamba (Kunyoreswa) kwakabatana nezvikafu zvavo. MuFirefox 2 ini ndine feeds yakagadzirirwa kuti iende yakananga kuFeedDemon, saka kana iwe usina chinongedzo pane peji icho chandinogona-kudzvanya-pfava nekuteedzera chinongedzo, saka ndinofanira Kutarisa Source kuti ndiitore.
Ndira 5, 2007 na8: 08 PM
Ndiwo mabhadharo andakanyorera kublog rako kuburikidza neiyo RSS icon pazasi. Ini handimboteerere kune izvo zvinongedzo zviri mubrowser kero bar pamwe asi asi kana uchishandisa browser; izvo zvisingawanzo kazhinji, ini ndinogara ndichitsvaga iyo Icon.
chimwe chinhu chekurangarira futi haisi munhu wese achauya kublog rako kuburikidza nebrowser. Vamwe vanozouya kuburikidza nehukama mune yavo isiri-browser RSS vatengi uye zvakanyanya hazviite iyo yakavakirwa mabhurawuza evatengi kuona iyi nzira…
Ndira 5, 2007 na8: 12 PM
Yaive iyo RSS icon yekubatanidza yandaimbonyorera nayo - sezvo ini ndisina kumbobvira ndatarisisa kune kero bar yekiyi uye ini kazhinji ndaiwanzo kunyorera kuburikidza nebrowser.
Ini ndinogara muRSS yangu muverengi uye nekudaro zvese zvangu zvinongedzo zvinonyanya kuwanikwa uye kuwedzerwa nenzira iyoyo uye vashoma kwazvo vanomira vega RSS mutengi vane mhando yakadaro.
Jan 6, 2007 pa 12: 38 AM
Doug, ini ndazara newe pane ino! Ingoita posvo pane rangu nyowani RSS Bhatani rerudo 🙂
Pfungwa yakanaka Sterling, ini ndinoita zvakafanana dzimwe nguva.
Ndira 6, 2007 na7: 59 PM
Zano rakanaka, ndinaro mune zvese izvozvi.
Jan 9, 2007 pa 3: 53 AM
Ndatenda neichi posvo. Ini ndanga ndichikurukura uyu musoro nemumwe blogger mwedzi wapfuura uye ini ndaigara ndichinetseka kuti ndeipi nzvimbo yakanakisa yekuisa bhatani bhatani. Parizvino pane yangu saiti ini ndinongova neiyo RSS icon mubrowser kero bar uye tsoka, asi ndinofunga imwe iri padivi kana musoro inogona kubatsira zvakare, zvichibva pane zvataurwa zvandakaverenga pano.
Ndira 11, 2007 na10: 48 PM
Ini ndaive neyangu kumusoro, asi ikozvino ndirikunetseka kuti sei ndisina kumbozviisa muzasi kare.